युगसम्बाद साप्ताहिक - चर्चामा दुई युवती : अयोग्य पूर्व लडाकु र तरकारीवाली
Friday, 04.10.2020, 07:30am (GMT+5.5) Home Contact
चर्चामा दुई युवती : अयोग्य पूर्व लडाकु र तरकारीवाली
Tuesday, 11.08.2016, 12:37pm (GMT+5.5)
तिहार सकिए लगत्तै नेपालका दुई युवती चर्चामा रहे । एकजना आफ्नो कर्मले चर्चामा छिन् भने अर्की एकजना एकाएक चर्चामा रहिन् । सेना समायोजनका क्रममा अयोग्य ठहरिएकी मिरा राई अहिले अल्ट्रा धाविकाका रुपमा विश्वचर्चित छिन् । उनल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल ठहर्याइसकेकी छिन् ।
यिनै धाविका राई एड्भेन्चरर्स अफ दि इयरको पिपुल्स च्वाइस अवार्डको मनोनयनमा परेकी छिन् । मिराले गत वर्ष एड्भेन्चर्स खेलको प्रर्बधन तथा विकासमा उल्लेखनीय योगदान गरेको भन्दै नेशनल जियोग्राफीले मनोनयन गरेको हो । यो मनोनयनमा मिरासंगै अरु १० जनाको नाम सार्वजनिक गरिएको छ ।
यसका लागि अनलाइन भोटिङ डिसेम्बर १६ बाट सुरु हुने बताइएको छ । यसका लागि अनलाइन प्रयोगकर्ताले आफूले मनपरेका खेलाडी वा टिमलाई दैनिक रुपमा भोट गर्न सक्ने छन् ।
यस विधामा मिरासंगै दि होक्ल्युज टिम, सानोन स्विटजर स्वानसन, एन्टोनी गिरार्ड, असिमा श्रियैसी, कोलीन हाली, सिमिट ली, पिटर म्याक ब्राइड र कभिन फिर्डाको, र्कि्र्जिस्तोलोफ स्टरन्वास्की तथा क्रिस्टिाइन म्याकडिभिट तोम्कीन्स रहेका छन् । अनलाइन भोटिङका आधारमा सन् २०१७ को जनावरीमा पिपुल्स च्वाइस अवार्डको विजेताको नाम घोषणा गरिने बताइएको छ ।
भोजपुर सानो दुम्जाकी २५ वर्षीया राईले शान्ति सम्झौतापछि अयोग्य भएपछि एथ्लेटिक्समा लागेकी थिइन् । मिराले पहिलो पटक काठमाडौंमा भएको अल्ट्रा हिमालयन आउटडोर दौडमा भाग लिएकी थिइन् । उनको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा भने इटलीबाट सुरु भएको हो ।
दोस्रो चर्चा कुसुम श्रेष्ठको हो । उनी सामाजिक संजालमार्फ रातारात हिरो बनिन् । सूचना सूचना प्रविधिको विकासले उनको जीवन अर्कै मोडमा पुग्यो । एकजना फोटोग्राफरले खिचेर सामाजिक संजालमा हालेको एउटा फोटोले तरकारीवाली केटीका रुपमा नेपालभित्र मात्र हैन भारतमा समेत चर्चित भयो र विदेशी संचारले पनि समाचारको विषय बनाए । केही दिन पहिले पाकिस्तानको एक चिया बेच्ने युवकको तस्वीर संसारभर तहल्का मच्चिएको थियो । सोही तस्वीरले उनी चिया व्यापारीबाट मोडल बन्न पुगे ।
गोरखा भुम्लिचोक ८ का ४० वर्षीय चन्द्रलाल र ३८ वर्षीया ज्ञानु श्रेष्ठकी एक्ली छोरी कुसुम दशैं तिहारको कलेज बिदामा घर आएकी थिइन् र त्यहीबेला सदाका झैं बाबुआमालाई बारीबाट तरकारी टिपेर बेच्न फिस्लिङ ल्याउन सहयोग गरेकी थिइन् । त्यही फोटो भाइरल बन्यो ।
यहाँ प्रश्न उठाउन खोजिएको के हो भने ती युवतीको मोहेनतको चर्चा कम र उनको सौन्दर्यको चर्चा बढी भयो । यो पक्ष आलोलनाको विषय पनि बन्नसक्छ । अर्कोतिर उनको अनुमतिबिना सो फोटो सामाजिक संजालमा राख्न हुन्थ्यो कि हुन्थेन । पत्रकारिताका विद्यार्थीहरूका लागि आफ्ना अग्रजसंग प्रश्न सोध्ने मेसो पनि बनेको छ ।
चर्चामा आउन र चर्चामा ल्याउन अपनाइने हथककण्डाका रुपमा तरकारी बेच्ने युवतीको तस्वीरलाई लिन नसकिए पनि उनको तस्वीरको अर्को पाटो मोहेनत र आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ भने कसैको ध्यान नजानु नै दुःखको विषय हो ।
घरबाहिर बसेर अध्ययन गरिरहेकी कुसुम घर आएका बेला बिहान उठेदेखि राति अबेरसम्म घरमा आमाबुबालाई काममा सघाइरहेकी हुन्थिन् । शहर पस्तैमा घरको काम गर्न नहुने मान्यता राख्नेहरूका लागि कुसुम उदाहरण हुन् ।
मुलुकका प्रतिष्ठित संचार गृहहरू उनको अन्तरवार्ता लिन र भिडियो बनाउन तल्लिन छन् । प्रश्न यहीं छ । यो सब केका लागि ? उनले गरेको मेहेनतको प्रचार गरी अरुलाई प्रोत्साहित गर्न कि संसारभर फैलिएको उनको अनुहार विक्री गरेर आफ्नो फाइदा बढाउन ?
कुनै व्यक्तिगत समाचार वा फोटो संचार सामग्रीका रुपमा प्रयोग गर्नुअघि सम्बन्धितको अनुमति लिनुपर्छ । अनि त्यसको विश्वसनीयता पनि पुष्टि हुनुपर्छ । जे होस् यी युवती तरकारी व्यवसायी हुन् भन्नेमा शंका नगरौं । तर अब सवाल के हो भने उनको सौन्दर्यको चर्चासंगै रोजगारी भनेको सरकारी जागीर वा विदेश जानु मात्रै हो भन्दै खेतबारी बन्धकी राखेर बाँझो पल्टाएर मरुभूमिमा रगत चुहाउनेहरूका लागि प्रेरणा बन्ने गरी सामग्री सम्पेषण गर्नु संचार माध्यमको दायित्व हो ।
एउटा व्यक्तिको मेहेनत, लगन र इमान्दारीता धेरैका लागि पाठ हुन्छ । विश्वमा यस्ता अनेक उदाहरण छन् । ठूलठूला राजनीतिक क्रान्तिदेखि आर्थिक विकासको आधार तयार पार्ने एकजना नै हुन्, फरक के मात्र भने अरुले त्यसको अनुसरण गर्छन् कि गर्दैनन् । हामी पनि तरकारीवाली युवतीको अनुहार हैन, उनको मेहेनत र लगनशीलता हेरौं, आफूलाई पनि त्यस्तै बनाउने जमर्को गरौं, हामी विस्तारै आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ अग्रसर हुनेछौं ।
तामाङलाई रु दुई लाख ५० हजार प्रदान (11.11.2014)
क्रिकेटको सान कायमै (11.04.2014)
नेपाली क्रिकेटको झण्डा गाड्न आए पुबुदु (09.02.2014)
मलेसियामा शान राख्दै नेपाली क्रिकेट टोली (05.05.2014)
विश्वकप क्रिकेटः नेपालको ऐतिहासिक जित (03.19.2014)
“एउटै मान्छेको असल सोचले पनि परिवर्तन” खड्का (12.10.2013)